Mapfumo anoshandiswa kutenderera pasirese, anodarika mamirioni matatu ekuisirwa pamwedzi | Linux Vakapindwa muropa
Kupemberera Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish kuburitswaCanonical yakaburitsa nyowani infographic inoratidza maSnaps mapakeji akafamba sei pasirese.
Inonzi "Inobhururuka muNhamba," iyi infographic inotarisa kune manhamba muSnaps, Canonical's universal fomati iyo inobvumidza kutsikisa kunyorera mukati meLinux kugovera nenzira yakapusa. Iyi tekinoroji, inonzi Snappy pakuvhurwa kwayo, inobvumidza iwe kuvhura yakachengeteka uye yakapusa magadziriso eunofarira maficha
Zvinoenderana neiyo infographic, pane zvinopfuura 4100 Snap mapakeji anowanikwa kurodha pasi kuCanonical chitoro, chinowanikwa nekumisikidza pane ese Ubuntu mashandiro masisitimu, pamwe nekuve nerutsigiro rweanopfuura makumi mana makumi mana ekuparadzirwa munzvimbo yeLinux ecosystem.
Iyo infographic inoratidza zvakare kuti maSnaps anoshandiswa nevanhu kutenderera pasirese uye kune zvinopfuura zviuru zana zvinokwana zvimisikidzwa zvakaiswa zuva nezuva mugore, maseva, makontena, desktop uye IoT (Internet yezvinhu), izvi zvinotungamira kune yakazara mamirioni matatu kuiswa. .
Anonyanya kuzivikanwa Snaps pane desktop anosanganisira Firefox, VLC, Media Player, Slack, Spotify, Skype, uye Plex Media Server. Mugore nemaseva, akanyanya kuzivikanwa Anopfura ndiAWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Kubernetes, uye Heroku. OpenHub, Kura, Node-RED, uye Home Bridge ndiyo inonyanya kufarirwa IoT.
Kana usati waedza kumisikidza maapplication kuburikidza neZvinotsemuka, iyo infographic inokuudza kuti sei. Ivo vanomhanya kwazvo, otomatiki inogadziridza uye vakachengeteka kwazvo. Unogona kutarisa kana ako aunofarira maficha aripo mu zviri pamutemo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Mapfumo anoshandiswa kutenderera pasirese, anodarika mamirioni matatu ekuisirwa pamwedzi
Juan J. Pena akadaro
Kutenda Luis Lopez. Kubva Palma de Mallorca.
Pindura Juan J. Peña
Ini ndoda munhu anonditsanangurira zvirinani izvo zvinofadza "zvinobhururuka". Chinhu chinosekesa ndechekuti ivo vanowedzeredzwa neimwe nzira [ratidza pano kuti ndechipi chinhu chakanaka nezve izvi] pane zvechivanhu kugadzirisa?
Uye kujekeswa kuviri:
1) Ini ndinogara munzvimbo uko kubatana, zvisinei nemupi, kuri kunonoka kana kusagadzikana (kusvika 1 kana 2 Mb yakakwira). Izvo zvinobatsira pamamiriro angu ezvinhu?
2) Ndine Ubuntu 16.10 32-bit uye handigone kuimutsidzira kusvika 18 nekuti hapana 32-bit. Ndichiri kushandisa izvo "zvinonamira"?
Nenzira, ini ndoda kuzvibvunza mubvunzo: ndine kabhuku kane hunyambiri bhutsu, ine Ubuntu neWindows 10. Windows SI ine 64-bit, asi pese pandakada kuisa Ubuntu 64-bit, yairovera uye yaitofanira dzokera kunguva ye32. Ndine Intel Core i7 2.7 GHz processor, 8 Gb ye RAM uye 250 Gb pane yega yega sisitimu yekushandisa. Unogona here Ubuntu kukwidziridzwa kusvika makumi matanhatu neshanu, kana kuti ndinofanira kuzvisiya?
Ndatenda pamberi paizvo zvaunogona kundiudza.
Zvakanaka: ndinofungidzira (kutanga kunetsekana) kuti zvese zviri zviviri Snap Craft web uye zvimwe zvese zvekushandisa zvichave muChirungu chakakwana, mutauro wandisingataure uye izvo zvinoita kuti ndirege kuisa chero chinhu kuburikidza nesystem ino.
Kunze kweizvozvo kweMint Cinnamon, ivo vanozove nekuwedzera kuoma. Panguva ino ini chete ndinoona kuti inondibvunza nzira zhinji dzekubhadhara. Pamusoro pazvose, usarega iyo mari ichitsvedza! Asi ini handione machengeterwo ekuudza iwe kuti ndichabhadhara sei.
Sezvo sisitimu iri kunetsa but, ini zvirinani kuichengetera imwe nguva. Ini ndinofunga zvakanyanyisa, kuomarara.
Jose Luis Mateo, ini ndinowanzo gadza mamwe mafomu mu snap uye anowanzo kuve muSpanish, VLC, LibreOffice, semuenzaniso ...
Ini ndinoshandisa Ubuntu uye zvakare KDE Neon, uye ini handina matambudziko, handizive mashandiro achashanda muMint, asi mabhureki anogona kuiswa ese ari maviri kuburikidza neiyo terminal uye distro's chitoro cheapp kana iine snap rutsigiro. MuGnome ivo vanokwanisa kuiswa graphically kuburikidza neGnome software chitoro uye muPlasma 5 kuburikidza nekuwana nekuisa rutsigiro rwevanotora. Ini handina zano kana iyo Mint app chitoro ine rutsigiro rwekuisa zvimedu, asi ivo vachiri kugona kuiswa neiyo terminal chaizvo zvakapusa.
Ini handizive iwe zvaunoreva nenzira yekubhadhara, kana mazhinji ezvibodzwa akasununguka, haufanirwe kubhadhara chero chinhu, pamwe pane mamwe, asi haasi iwo mazhinji.
iyo yepamutemo vhezheni ine gnome ndeye x64 chete asi ne xubuntu uye lubuntu kana iine 32-bit vhezheni senge, linux mint
nyasha dzekubata ndiyo maraibhurari, ndokuti, mutsauko kune yakajairwa kumisikidzwa ndeyekuti iyo ssap kana flatpak yatotakura maraibhurari ese anodiwa nechishandiso
Iwe unogona kuisa iyo 64-bit vhezheni asi edza ne xubuntu 18.10, lubuntu mate18.10, lubuntu 18.10 kana linux mint 19, ona kuti zvinofamba sei, zvinoita ingave iri dambudziko nevatyairi vekadhi revhidhiyo kana processor, edza imwe desktop kubva kubuntu
snap kuiswa kunogona kukubatsira
ALBERTO URZUA ARAVENA akadaro
Iwo mabhureki muUbuntu anononoka kwazvo kana iwe ukaafona kana kuivhura kekutanga, hafu yeminiti pamaPC anoshanda zvakanyanya, uyezve kechipiri kechipiri ivo vanomhanyisa asi havana kumbobvira vakaita seaya akaiswa kuburikidza neiyo terminal zvine apt, aya ndiwo inokurumidza uye inishuwarenzi.
Ndokumbirawo, vanababa veCanonical, usaise zvimwe SNAPS mune pre-yakaiswa fomu, kana zvirinani, taura uye utaure kuti ndedzipi dzakafanogadzirwa kuburikidza nekubvarura kuti dzidzimise uye dzoitsiva zvine apt, ndiko kuti, kuburikidza neiyo terminal console.
Pindura kuna ALBERTO URZUA ARAVENA
Kodachi Linux yakavhurika sosi anti-forensic distro